Posted by ဦးဂင်ကြီး at 10:48 PM
Thu, December 13, 2010 at 1:36 AM
I agreed your interesting explanation with valid references.
“အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျနော်တို့က ဂျပန်ကို ဖိတိုက်ရင် ဂျပန်က ကျနော်တို့ကို ပြန်တိုက်မည်။ ထိုဒဏ်ကို သူမခံနိုင်လို့မလာသည့်သဘော ဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ငြိမ်းမှာ အနာမခံလိုသော နိုင်ငံရေးအချောင်သမားကြီးဖြစ်သည်ကိုသိနိုင်ပေသည်။”
However, above comment was noted fromaside of Bogyoke Kyaw Zaw's assesment up onaword
and that was not clear from U Kyaw Nyein's side what he really meant
(personal or other matters etc).
With due respect to them,